"Dapoxetine" Gwa Gị: Otu esi emeso Ejaculation n'oge ochie?
"Dapoxetine" Na-agwa Gị: Otu esi emeso Ejaculation akaghi aka?
1. Ejaculation mbemiso
2. Kedu ihe bụ Dapoxetine?
3. Ọdịdị nke Dapoxetine maka PE
4. Esi ewepu Dapoxetine?
5. Gịnị Ka I Kwesịrị Ịme Tupu Iwere Dapoxetine?
7. Dapoxetine: Ò Kwesịrị Ekwesị Maka Onye Ọ Bụla?
8. Dapoxetine na ọgwụ ndị ọzọ
9. Na-ewere Dapoxetine ugbu a na-ekwu "byebye" ka PE !!!
10. Enwere ihe ize ndụ ahụ ike mgbe ị jiri dapoxetine?
Ejaculation mgbochi (PE) bụ ọgba aghara na-emetụtakarị banyere 30% nke ụmụ nwoke. A na-eji ọnọdụ ahụ na-ebelata ma ọ bụ na-achịkwa akara n'eja n'ime ihe na-erughị otu nkeji nke mmekọahụ. Nsogbu mmekọahụ a, nke nwere ike imetụta nwoke ọ bụla na-enwe mmekọahụ, nwere mmetụta dị oke ụbụrụ nke nwere ike imebi mmadụ.
N'ụzọ dị mwute, e nwere ọgwụgwọ ahụike nke nwere ike inye aka ịgwọ ejaculation akaghi aka, na dapoxetine bụ otu n'ime ndị kachasị dị irè n'ahịa taa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmara esi emeso PE, ị ga-agụ nyochaa ntụzigharị zuru ezu iji chọta azịza niile ị na-achọ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ Dapoxetine?
Dapoxetine HCL (129938-20-1) bu ogwu serotonin reuptake inhibitor (SSRI) bu nke edeputara nke oma ma dokwa anya nke oma iji dozie ejaculation. Ọgwụ a na-arụ ọrụ site n'ịgbanwe ọkwa nke onye na-ebugharị serotonin, na-eme ka ihe serotonin na-arụ na synaptic cleft, si otú a na-akwalite oge ejaculatory n'ihi.
A na-azụ ahịa Dapoxetine dị ka Priligy, a kwadoro ya maka iji ya na ahịa na mba 50 gburugburu ụwa. A na-erekwa ọgwụ a n'aha aha dị iche iche, gụnyere Westoxetin, Primaxetin, Joytab, Ever Long, Sustinex, Longride Pentenal-30, Lejam, Kutub, Joybox, Duratia, na Dumax.
E nwere ọtụtụ mba ndị kwadoro dapoxetine maka ire ere nye ndị mmadụ karịa afọ 18. Otú ọ dị, Food and Drug Administration (FDA) na United States adịghị akwado ya ugbu a na United States. Nke a pụtara na ị nweghị ike inweta ọgwụ ndenye ọgwụ na US
Mgbe e mepụtara dapoxetine na mbụ, e bu n'uche iji ya mee ihe dị ka onye na-egbochi ịda mba ma mana ka ọ ga-enweta ya, achọpụtara nsonaazụ a na-atụghị anya ya - a chọpụtara na ọgwụ ahụ dị irè na igbu oge ejaculation. Taa, a na-eji dapoxetine eme ihe dịka nhọrọ ọgwụgwọ maka PE ma ọ bụghị dị ka antidepressant. N'adịghị ka ndị SSRI ndị ọzọ, dapoxetine na-etinye uche ngwa ngwa ma wepụ ya n'ahụ, na-eme ka ọ bụrụ ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka ejaculation akaghi aka. Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Ọdịdị nke Dapoxetine maka PE
Inwe mmekorita nke nwoke na nwanyi bu ihe di mkpa n'inwe ahuhu nwoke na nwanyi. Oge mkparịta ụka ejaculation oge (IELT), nke bụ oge dị n'agbata mmalite nke ịmịnye mmiri na mmalite nke ejaculation intravaginal, bụ ihe dị mkpa na nghọta nke arụmọrụ mmekọahụ na afọ ojuju.
Ndị dọkịta na-echekarị IELT mgbe ha na-achọpụta ma na-emeso ejaculation akaghi aka. Maka ndị nwere obere ụbụrụ IELT, ha nwere ike ịba uru dị ukwuu site na ndị na-emechi ihe nchịkwa serotonin. Nke a bụ n'ihi na SSRI na-egbochi usoro usoro ọgwụgwọ jikọtara na-apụghị ịme ihe. N'ihi nke ahụ, a pụrụ iji SSRI mee ihe maka ịgwọ ejaculation.
Dapoxetine (CAS.) 129938-20-1) bụ otu n'ime SSRI nke achọpụtara na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma n'ịgwọ ejaculation akaghi aka. Ọgwụ a bara uru na-egbu oge mkpali nke amụ wee si na-egbu oge. Ihe na-arụsi ọrụ ike nke ọgwụ ahụ na-etinye uche n'ahụ ngwa ngwa wee malite ịrụ ọrụ na nkezi otu ruo awa abụọ mgbe ọ nụsịrị ya.
Nnyocha e mere gosiri na ọgwụ PE a na-eme ka ụbụrụ ejaculation na-abaghị uru. N'ime otu ọmụmụ, ndị nwere oke IELT nke 1 nkeji na-eme ka IELT dịkwuo ogo minit 3.1 mgbe ha nyesịrị ọgwụ 30 na 3.6 nkeji mgbe ha nyesịrị ọgwụ dose 60. Nke a pụtara na dapoxetine dị irè n'inweta arụmọrụ mmekọahụ.
Otu esi eji Dapoxetine?
Dapoxetine hcl (dapoxetine hydrochloride) dị na mbadamba 30 mg na 60 mg, nke ezubere iji ọnụ kwuo. N'adịghị ka ndị ọzọ SSRI nke a ga-ewere kwa ụbọchị iji kpalite mmetụta achọrọ, a ga-ewere dapoxetine na ntọala "dị mkpa". Ọgwụ a na-arụ ọrụ ngwa ngwa, yabụ ị kwesịrị ị itụ ya mgbe ị na-atụ anya inwe mmekọahụ, karịa kwa ụbọchị. Ikwesiri icheta ime ihe ndị a:
Were otu mpempe akwụkwọ napoxetine 1-3 ọtụtụ awa tupu ị nwee mmekọahụ,
Gbanye mbadamba mbadamba nkume n'enweghi ocha dika o nwere uto ilu. Ọzọkwa, ịṅụ ọgwụ ahụ pụrụ ibelata ịdị irè ya.
Were otu mbadamba nkume ma ọ dịkarịa ala otu iko mmiri zuru ezu.
Ị nwere ike iji mbadamba nkume ma ọ bụ na-enweghị nri. Ị nwekwara ike iwe ya ma ọ bụ mgbe ị risịrị nri. Ka o sina dị, onye na-emepụta ihe na-enye ndụmọdụ megide ịṅụ nri napoxetine na nri dị oke mkpa dị ka nri abalị dị ka ọ nwere ike igbu oge ọgwụ ọjọọ.
Gịnị Ka I Kwesịrị Ịme Tupu Iwere Dapoxetine?
Tupu ebute ọgwụgwọ dapoxetine, ị ga-agwa dọkịta gị gbasara akụkọ ahụike gị na-elekwasị anya na ihe omume ọdịnala gara aga. Dika dọkịta kwesịrị ịmepụta ule nyocha (nchịkọta mkpụrụ ndụ, mgbali elu, nkwụsị na nkwụsi ike.) Ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ọ bụla nke mmeghachi omume nke orthostatic ma ọ bụ ezumike nke orthostatic na-ekpughe ụdị mmeghachi omume, a ghaghị izere ọgwụ napopoxetine. Gịnị mere Sibutramine ji ewu ewu na ọnwụ?
Tupu iwere dapoxetine, ọ dị mkpa ịkọrọ dọkịta gị ma ọ bụrụ:
Ike gwụrụ gị site n'oge ruo n'oge,
Ị na-enwe nsogbu obi ọ bụla
Ị nwere nsogbu ọgbụgba ma ọ bụ ọbara ọgbụgba
Ị bụ epileptic
Ị nwere glaucoma
I nwere nsogbu imeju
I nwere nsogbu akụrụ
Ihe ọ bụla nke mepoxetine ingredients na-enye gị nsogbu
Ị nwere akụkọ ihe mere eme nke nsogbu ahụike uche dị ka nsogbu, ịda mbà n'obi, ọrịa bipolar, ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ọzọ na-akpata ọnọdụ dị ala ma ọ bụ dị elu,
Ọ bụrụ na dọkịta gị achọtara ya dị mma maka ịbịaru napoxetine, ị ga-ahụrịrị anya ịgbaso ndụmọdụ niile enyere. Hụ na ị gụọ akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ akụkọ nke si n'aka n'ime mkpọ ahụ. Akwụkwọ nta ahụ nwere ihe dị mkpa gbasara dapoxetine, gụnyere ntụziaka maka iji, nlezianya iji nweta, nakwa mmetụta ndị nwere ike ịnweta mgbe ị na-aṅụ ọgwụ.
Ntụziaka a na-atụ aro bụ otu 30 mg napoxetine mbadamba. Ọ bụrụ na ọgwụ 30 weere na ọ gaghị ezu, onye dọkịta gị nwere ike kpebie ịme ka ị gbanyekwuo otu mpempe 60 mg napoxetine. Dika dọkịta gị nwekwara ike ịdọ aka na ọgwụ dị elu ma ọ bụrụ na ị nwere ọchịagha ka ị ghara inwe mmetụta ọ bụla mgbe ị nụsịrị ọgwụ 30 mg.
Ebe ọ bụ na enweghị usoro ọgwụ edozi maka ọgwụ a, na-efu atụmatụ dapoxetine dose adịghị anya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe karịrị otu tebụl napoxetine dị na 24 awa, ọ ga-adị mma ịchọta ọgwụ ozugbo. Mgbaàmà nke nkwụsịtụ gụnyere:
Egwu nke aka, wdg
Iji zere nsogbu ọ bụla, ị kwesịrị:
Were napoxetinetablets dịka ọkachamara gị gwara gị,
Soro ntuziaka niile eji edepụta aha,
Ejila ọgwụ dị obere karịa ma ọ bụ buru ibu karịa nke akwadoro,
Soro dọkịta gị soro mgbe ị na-ebu mbadamba tepoxetine.
Ozi ọma bụ napopoxetine hcl (dapoxetine hydrochloride) dị irè n'ịgwọ ọrịa ejaculation. Ozi ọma na-adịghị mma bụ na, dịka ọtụtụ ọgwụ, dapoxetine nwere òkè dị mma nke mmetụta ndị dị na ya. N'otu nnyocha, ụmụ nwoke ndị nabatara napoxetine kọọrọ mmetụta ndị napoxetine ndị na-esonụ:
ọgbụgbọ: Nke a bụ mmetụta a na-akọkarị napopoxetine. Nnyocha e mere na-egosi na ihe dịka 10 percent nke ndị ikom were ọgwụ 30 na ihe dịka 23 pasent nke ndị ikom na-ewere 60 mg dose kọrọ mmetụta nauseous.
Ịdị nwayọọ / ìhè: Nke a bụ nke abụọ kachasị mmetụta napopoxetine, na-egosi 6 pasent nke ndị were 30 mgs dose na banyere 11 pasent nke ndị na-ewere 60 mg dose.
isi ọwụwa: Banyere 5.6 pasent nke ndị ikom na-ewere 30 mgs dose na banyere 9 pasent nke ndị na-ewere 60 mgs dose mkpesa nke nwere isi ọwụwa.
afọ ọsịsa: Banyere 3.5 percent na 7 pasent nke ndị ikom na - ewere 30 mg na 60 mg nke dapoxetine na - enweta afọ ọsịsa.
Enweghi ike: N'ihe dị ka 3.1 pasent nke ndị ikom were ọgwụ 30 na banyere 4.7 pasent nke ndị weere ọgwụ dose 60 kọrọ na ha enweela mmetụta a.
Ihe ndị ọzọ napopoxetine na-emetụta na-akọ gụnyere nasopharyngitis, ehighị ụra nke ọma, na ike ọgwụgwụ, nke metụtara n'etiti pasent 2-3 nke ndị were ọgwụ 30 na n'etiti 3-4 pasent nke ndị were ọgwụ 60 mgs. E nwekwara ụfọdụ obere mmetụta dị na dapoxetine, nke gụnyere
Buzzing ma ọ bụ na-etigharị na ntị
Mgbagha na ụjọ
Obi ike na oge oge
Ga - ahụ ndepụta zuru oke nke mmetụta dapoxetine na mpempe akwụkwọ ozi nke onye nrụpụta n'ime ngwugwu ahụ. Mmetụta ndị na-enye nsogbu na-akawanye mma mgbe ahụ gbanwere ọgwụ ahụ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mmetụta dị iche iche iji chọọ, ọ pụtaghị na onye ọ bụla na-ahụ ha. Ọ bụrụ na ịnweta mmetụta ọ bụla nke dapoxetine, ọ dị mkpa ịchọ enyemaka ahụike ozugbo.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta dị nro ma ọ bụ na-aga n'ihu, dinara ala ma ọ bụ nọdụ ala n'etiti ikpere gị ruo mgbe mmetụta ahụ gafere. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ na-ekpo ọkụ mgbe ị nwụsịrị napopoxetine, nọdụ ala ma ọ bụ dinara ruo mgbe mmetụta ahụ gafere iji zere ịda ma na-emerụ ahụ onwe gị. Ọ dịkwa mma ị ga-agwa onye dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ka o wee nwee ọgwụ kwesịrị ekwesị iji dozie nsogbu (s).
Dapoxetine: Ò Kwesịrị Ekwesị Maka Onye Ọ Bụla?
Dị ka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ, dapoxetine abụghị maka onye ọ bụla. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụghị ndị ikom a na-achọpụtaghị na ejaculation na-emezughị ọgwụ a. Ya mere, a ghaghị ịnwale gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma nye gị nyocha ahụ kwesịrị ekwesị nke ejaculation akaghị aka na ntinye aka na nchịkọta ndị a n'elu tupu e mesoo gị na dapoxetine.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa siri ike, ị bụghịkwa onye kachasị mma maka ọgwụgwọ dapoxetine. Ọrịa ndị na-eme ka ị ghara ịbụ ezigbo onye nnochite maka ọgwụgwọ dapoxetine gụnyere nsogbu uche, ọnọdụ obi, na glaucoma.
Ọ bụrụ na ị bụ agadi ma ọ bụ na-eto eto, ị bụghị ezigbo onye nyocha. Onye ọ bụla nke na-erughị afọ 18 ma ọ bụ karịa karịa 64 afọ ekwesịghị ịnapoxetine.
N'ikpeazụ, ụmụ nwanyị abụghị ezigbo ndị ga-aga ọgwụgwọ dapoxetine. A na-eji ọgwụ a eme ihe maka ụmụ nwoke n'etiti 18 na 64 afọ.
Ya mere, onye bụ dapoxetine maka? Ọfọn, a nabatara dapoxetine maka ịgwọ usoro ejaculation aka nká na ndị okenye nke afọ 18-64. Nchịkọta nke njirimara ọgwụ a na-ekwuputa na naanịpoxetine ga-edere ya na ndị okenye bụ ndị na-agbaso ihe ndị a niile:
Ogbenye na-achịkwa ejaculation, na oge ezighi ezi na-ejide onwe ya (IELT) nke karịa karịa 2 nkeji,
Ejaculation na-aga n'ihu ma ọ bụ na-adịgide adịgide na-enwe mmetụ mmekorita nwoke na nwanyị tupu oge eruo, na, ma ọ bụ ngwa ngwa mgbe ha rụsịrị na tupu nwoke ahụ achọọ,
Nsogbu doro anya ma ọ bụ nhụjuanya onwe onye dịka ụda nke ejaculation oge,
Akụkọ banyere ejaculation akaghi aka na ihe ka ukwuu n'ime mmekorita nwoke na nwanyi na-anwa ime tupu onwa isii.
Dapoxetine na ọgwụ ndị ọzọ
Ejaculation mgbochi (PE) na (ED) bụ nsogbu ahụike mmekọahụ abụọ dị iche na ụmụ nwoke, mana ED bụ nsogbu siri ike karịa nke PE. Cialis bụ ihe na - egbochi ihe phosphodiesterase 5 (PDE-5), ọgwụ na - arụ ọrụ nke ọma n'ịgwọ nsị site na-enwe mmetụta dị mma na akwara nke amụ. Tadalafil, nke bụ ọrụ Cialis na - arụ ọrụ, na - enweta ahụ ngwa ngwa ma na - enyere aka iweghachi okirikiri ihe dị ka minit 20-60 mgbe iwere ya ma na - enyere aka ịnọgide na - agbatị ọkụ ruo awa 24-36.
Menfọdụ ụmụ nwoke nwere nrụrụaka chọrọ ọ bụghị naanị iweghachi akwara, kamakwa ka ha na-enwe mmekọahụ. Tmụrụ Tadalafil / Cialis naanị agaghị enyere ndị nwoke nwere dysfunction aka inwe mmekọahụ na - adịte aka. Agbanyeghị, mgbe ha jikọtara Cialis na dapoxetine, ha nwere ike ịmalite ọrịrị ma gbatịkwuo ogologo oge nke inwe mmekọahụ site na nkezi 50-70.
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na ma nsị na ejighi ụkọ, ị ga-enwe ahụ iru ala ịmara na iwere ọgwụ dapoxetine na Tadalafil dị mma ebe ọ bụ na ọgwụ ndị ahụ nwere mkparịta ụka nkịtị. Agbanyeghị, iji ọgwụ ndị a mee ihe ogologo oge chọrọ nyocha nke mbido na nyocha mgbe niile site na andrologist. Ndụmọdụ ndị bụ isi maka iji Dapoxetine + Tadalafil (Cialis) bụ:
Were ọgwụ ọjọọ ahụ kachasị mma awa 1-2 tupu ịmalite inwe mmekọahụ,
Were otu mbadamba nke 30 mg ma ọ bụ 60 mg dapoxetine na otu mbadamba nke 20 mg Cialis kwa ụbọchị,
Gbanye mbadamba nkume ndị ahụ kpamkpam, n'achọghị ha ma ọ bụ na-agbajisị ha,
Aṅụla mmanya na-aba n'anya n'ụbọchị ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Ejila yapoxetine ma ọ bụrụ na ị gwụla. Dị ka ọmụmaatụ, ị kwesịrị ịhapụ nwa oge ịṅụ ọgwụ ahụ mgbe ịgwesịrị ọzụzụ egwuregwu na-agwụ ike.
Zere ikpo napoxetine ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ọkụ, maọbụ ọ bụrụ na ị na-eche na mmalite nke oyi.
Rịba ama na iji nkwonkwo dapoxetine na Cialis na-ejikọta ya maka ogologo oge na ịbawanye libido ka a na-agbanyere n'ime ọnwa 6 mgbe ị natara nhụjuanya nke myocardial ma ọ bụ ọrịa strok. A gaghị etinye ọgwụ ndị a ọnụ na ndị ọrịa nwere ọnọdụ dị oké njọ dịka ọnya anụ ụlọ, ọrịa obi biventricular, ntinye aka na ọrịa ịba ahụ, na ọbara mgbali elu.
Ndị na-arịa ọrịa ahụ na-arịa ọrịa ndị a, nakwa ndị nwere nsogbu usoro nke akụkụ ahụ anụ ahụ kwesịrị izere ịṅụ dapoxetine na Cialis. A machibidoro iji ọgwụ ndị a eme ihe ma ọ bụrụ na ndị ọrịa na-eburu ọgwụ na-emepụta nitrate na Ipha-adrenoblockers.
Sildenafil, nke a maara nke ọma dịka Viagra, bụ ọgwụ nke otu ìgwè ọgwụ ndị a na-akpọ 5 bụ ndị na-eme ihe na-emepụta phosphodiesterase. A na-eji ọgwụ a ama ama maka ọgwụgwọ ED. N'otu oge, ọ na - enyere gị aka imeri ma nọgide na - enwe nrụgide siri ike maka inwe mmekọahụ. Ọ na-eme nke a site n'ikwe ka ọbara na-arịwanye elu n'ime mkpanaka gị mgbe ị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Sildenafil n'ozuzu na-abịa n'ụdị atọ - 25 mg, 50 mg na 100 mg. Ntinye nke sildenafil a na-atụ aro bụ 50 mg, nke a ga-ewe oge ọ bụla site na awa anọ ruo ọkara otu awa tupu ịmalite mmekọahụ. Otú ọ dị, a pụrụ ịdọrọ ọgwụ ahụ gaa na 25 mg ma ọ bụ mụbaa na 100 mg, dabere na ọtụtụ ihe, gụnyere uru nke ọgwụ ahụ, mmetụta ndị dị n'akụkụ, ahụike, ọnọdụ ahụike na-adabere, na iji ọgwụ ndị ọzọ.
A na-atụle Dapoxetine HCL na sildenafil n'otu oge n'etiti ọgwụgwọ ndị kachasị dị irè maka mmerụ ahụ na ịmịcha mmiri. Viagra ga - enye aka na izu ike nke akwara na ịkwawanyewanye n'ọbara ọbara n'ọde gị. Dapoxetine, n'aka nke ọzọ, ga-egbu oge mkpali nke amụ gị wee si otú a egbu oge ejaculation. Atụmatụ Ntuziaka maka iji Dapoxetine + Sildenafil (Viagra) bụ:
Were ọgwụ ọjọọ na-achọ 1 awa tupu ịmalite mmekọahụ,
Were naanị mbadamba ụrọ nke dapoxetine na otu mbadamba ihe Viagra kwa ụbọchị,
Zere mmanya na-aba n'anya mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Ekwesighi iwere dapoxetine na Viagra ma oburu na:
N'iji ọgwụ ọjọọ eme ihe ma ọ bụ ihe ha na-eme,
Onye dọkịta gị gwara gị ka ị ghara inwe mmekọahụ,
Ị nwere akụkọ ihe mere eme nke nsogbu ọhụụ na-ejikọta na nhụjuanya na-emebi nkwụghachi nke kpatara site na belata ọbara,
Ị nwere nsogbu ọgbụgba ma ọ bụ ọbara ọgbụgba,
Ị na-eji ụdị ọgwụgwọ nitrate n'ụdị ọ bụla, ntụgharị nkedo, okwu ọnụ, akpụkpọ anụ, ma ọ bụ nke dị nro.
Ị na-eme ndokwa maka ọgwụgwọ ma ọ bụ ọrụ.
Dị ka ọ dị na ngwakọta ọgwụ ndị ọzọ e bu n'uche maka ọgwụgwọ nke ọrịa dysfunction na ejikọcha ọbara, a dịghị akwadoro ngwakọta nke dapoxetine na Viagra maka ndị nwere mmebi anatomical nke amụ. Mụ nwoke nwere ụdị mmebi ọ bụla nke amụ, dịka ọrịa Pyeronie, cavernosal fibrosis, ma ọ bụ nhụju anya kwesịrị ka ndị dọkịta ha nyochaa ya ma ọ bụrụ na ha ejikọta dapoxetine na Viagra.
Kwesịrị ka erepịa karịa 4 awa, ọ dịkwa mkpa ịchọta enyemaka ahụ ozugbo. Ọ bụrụ na edoghị nsogbu a ozugbo, nsogbu ndị ka njọ, dịka mmebi anụ ahụ na nhụsịrị ike nke ike ịme ụlọ, nwere ike ibili. Ọzọkwa, a ghaghị kọọ dọkịta ọ bụla mmetụta dị oke egwu n'atụghị egwu.
E wezụga ọgwụ ndị nwere nitrate, e nwekwara ọgwụ ndị ọzọ dị iche iche na-ejikọta HCL napopoxetine, ya mere a ekwesịghị ijikọ ọnụ n'otu oge ahụ. Ha gụnyere:
Ndị a bụ otu ụdị ọgwụ ọjọọ kachasị mara dị ka ndị na-eme ihe ike. A na-eji ha agwọ ọrịa dịgasị iche iche, gụnyere ịda mbà n'obi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nsogbu ịda mbà n'obi, dysthymia, ọrịa Parkinson, na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ.
Ndị na-emechi ọgwụ oxidase bụ ndị na-egbu egbu bụ ndị a ma ama maka ọtụtụ mkparịta ụka ọgwụ. Ndị na-eme ihe nchịkwa nke serotonin, dịka dapoxetine, bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị nwere ike iji ọgwụ MAOI emekọrịta ihe. Ya mere, ọ kachasị mma ka ị ghara iji dapoxetine ma ọ bụrụ na ị na-ewere ọgwụ ọ bụla nke òtù MAOI.
Iji zere mmetụta dị njọ, ị kwesịrị ị na-ewere 14 ụbọchị dapoxetine mgbe ịkwụsị ọgwụgwọ na ọgwụ MAOI. Dị ka o kwesịrị, ị ga-ewere ụbọchị 7 ọgwụ MAOI mgbe ị kwụsịrị iji dapoxetine.
Nchịkwa nke Thiorizadine naanị na - emepụta oge nke QTc, nke a jikọtara ya na nnukwu arrhythmias ventricular. Dapoxetine, nke na - egbochi CYP2D6 isoenzyme na - eme ka mgbochi nke thioridazine mechie. A na-atụ anya ọkwa ogo nke thioridazine iji mee ka ogologo oge nke QTC gafere.
Ya mere, a gaghị ejikọta dapoxetine na thioridazine. I kwesiri ichere ruo oge 14 gafechara mgbe ị kwụsịrị iji ọgwụgwọ gị na thioridazine. N'otu aka ahụ, ị ​​gaghị eji thioridazine tupu ụbọchị 7 agafechaa mgbe ị kwụsịrị iji dapoxetine kwụsị.
· Ọgwụ na-akpata mmetụta serotonergic
Dịka ya na ndị ọzọ na-emechi ihe nkiri serotonin, ndị na-ejikọta dapoxetine na ọgwụ ma ọ bụ mkpụrụ ọgwụ ndị nwere mmetụta serotonergic nwere ike ịkpata mmetụta nke mmetụta serotonin. Ya mere, mgbe ị na-ewere napopoxetine, ọ kacha mma ịzere SSRI, SNRI, na ọgwụ ndị ọzọ dịka linezolid, tramadol, lithium, tryptophan, triptans, na St. John Wort.
Ọgwụ ndị ọzọ iji zere mgbe ị na-ewere HpoL napoxetine gụnyere:
Ndị na-agwọ ọrịa na ọgwụ ndị ọzọ na-ebelata ọbara ọgbụgba. Mgbe ejiri ya na dapoxetine mee ihe n'otu oge, ihe ize ndụ nke ịgba ọbara ọgbụgba abawanye.
Ọgwụ, ọgwụ mgbochi nke bụ akin ka dapoxetine, dịka erythromycin, ketoconazole, fluoxetine, na ọgwụ nje dị iche iche, ndị na-agwọ ọrịa na ọgwụ nje.
Tamsulosin na ndị ọzọ a1-adrenoreceptor blockers na-eji maka ọgwụgwọ ọrịa ọrịa prostate.
Na-ewere Dapoxetine ugbu a wee sị "byebye" na PE !!!
Ọ bụrụ na ejaculation akaghị aka ejiri ígwé ojii kpuchie isi gị, dapoxetine nwere ike inyere gị aka wepụ ya maka ezi ihe. Ị nwere ike zụrụ dapoxetine online site na ụlọ ahịa a ma ama. Jide n'aka na ị gụọ ndị ahịa ahịa tupu ịzụta ịzụta iji jide n'aka na ị nwere ike ịdabere na ụlọ ahịa ịntanetị ị na-achọ ịzụta ọgwụ gị.
Enwere ihe ize ndụ ahụ ike mgbe ị jiri dapoxetine?
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọgwụ, enwere ihe ize ndụ ahụike nke ejikọtara na dapoxetine jiri. N'ụzọ dị mwute, mmetụta ndị na-emekarị napoxetine adịghị njọ, ọ bụghị mmadụ niile na-enweta ha.
Ụdị Dapoxetine na-emetụtakarị, na-emetụta ma ọ dịkarịa ala 1 na 10 ndị ikom) Ihe ị ga-eme iji belata mgbaàmà ahụ
ọgbụgbọ Gwa dọkịta gị ka ọ gwa gị ọgwụ kwesịrị ekwesị
Isi oriọna ma ọ bụ ịdị ọkụ Nọdụ ala ma ọ bụ dinara ruo mgbe mmetụta gafere ka ị ghara ịdaba ma mebie onwe gị
isi ọwụwa Gwa onye dọkịta gị ka ọ gwa gị ihe ị ga-eme
afọ ọsịsa Ṅụọ mmiri dị ukwuu ma jụọ dọkịta gị ka ọ gwa gị ọgwụ kwesịrị ekwesị
Ogologo oge ole ka dapoxetine ga-adịru?
Dapoxetine HCL bụ SSRI dị mkpụmkpụ. Oge nke oge ịba ụba nke plasma bụ ihe dị ka awa 1-2 mgbe ị nụsịrị ọgwụ a. Plasma etoju abụghị karịa 5% nke ọnụ ọgụgụ kachasị elu site na elekere iri abụọ na anọ mgbe a gụsịrị ya. Nke a pụtara na dapoxetine na-anọ n'ime ahụ ihe dị ka awa 24, nke bụ ogologo oge zuru oke maka ọgwụ a chọrọ iji kwụsị oge.
Enwere m ike ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya mgbe m na-eji dapoxetine?
Dịka ya na ọgwụ ndị ọzọ, ịṅụ mmanya amachibidoro dapoxetine iwu. Nke a bụ n'ihi na mmanya na-abawanye ohere nke nsonaazụ metụtara dapoxetine. Inwe mmeghachi omume nwayọ, ịnwe ụra ma ọ bụ na-atụgharị anya bụ mmetụta niile nwere ike ịbawanye ụba mgbe ejiri dapoxetine na mmanya. Mmetụta mmetụta ọjọọ nwekwara ike ịda, na-ebute nnukwu nsogbu ahụike nke nwere ike ịnwụ.
Kedu mgbe m kwesịrị iji dapoxetine?
Ị kwesịrị were dapoxetine "Na-achọ" ihe dị ka 1 ruo 3 awa tupu enwe mmekọahụ. Nke a na - eme ka ọ dị mma karịa iji ọgwụ ndị ọzọ na - ewe ogologo oge ka ọ dị mma. Agbanyeghị na ịnwere ike iri ya na nri gị, ọ kacha mma ịghara ị daụ dapoxetine mgbe nri siri ike, yabụ mgbe ị risịrị nri abalị.
Ebee ka m nwere ike ịzụta Dapoxetine?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta dapoxetine, ịnwere ike ịzụta ịzụta ihe n'Ịntanet. Ọ kacha mma ịlele saịtị dị iche iche na-ere ngwaahịa a iji tụnyere ego. Tupu ịzụ ahịa napopoxetine, jide n'aka na ị na-agụ nyocha ndị ahịa iji jide n'aka na ụlọ ahịa ịntanetị ị na-azụ si n'aka.
Kedu ka m ga-esi chekwaa napoxetine?
E kwesịrị ịchekwa Dapoxetine na ebe dị jụụ, ebe akọrọ, ma pụọ ​​ìhè anyanwụ na ọkụ. Ọ dịkwa mkpa ka ọ ghara ịhụ anya na ọhụụ nke ụmụaka.
Kedu ka m nwere ike isi nweta ọgwụgwọ dapoxetine kachasị?
Were dapoxetine kpọmkwem dị ka dọkịta ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ. Nke a pụtara na ọ dịkarịa ala ma ọ bụ karịa ihe edepụtara.
Lelee ụbọchị mmebi tupu ị na-ejikọta gịpopoxetine iji jide n'aka na ọ dị irè ma dị mma.
Soro ntụziaka nke ndị na-emepụta na nke ikpeazụ ahụ, gụnyere ntụziaka maka ọgwụ na iji zere mgbe ị na-eji dapoxetine.
Gwakọta dapoxetine dum n'achọghị ya. Jide n'aka na ị ga-eji dapoxetinewith iko mmiri zuru ezu.
Ejighi ọgwụ ọgwụ na-eme ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ gị yiri nke ahụ.
Aṅụla mmanya na-aba n'anya mgbe ị na-eji dapoxetine n'ihi na ọ nwere ike ịbawanye ohere nke mmetụta ahụ napoxetine.
Ejikọtala napoxetine na ọgwụ ndị ọzọ.
Jide n'aka na ị ga-eme ka gị na dọkịta gị soro na-emechi ya ka i wee nwee ike kpebisie ike.
Kedu uru nke dapoxetine bara?
Ọ na-eme ka e nwee ọgwụgwọ dị mma nke PE,
N'adịghị ka ọgwụgwọ ndị ọzọ maka ejaculation na-emezughị afọ, nke omume ya na-amalite ihe dị ka izu abụọ, mgbe ịchọrọ, dapoxetine na-amalite ọrụ ya na awa ole na ole mgbe ọnwa mbụ gasịrị,
Ọgwụ a na - eme ka oge ịmalite mmekọahụ nwee site ugboro atọ ma ọ bụ karị,
A pụrụ iji ọgwụ a mee ihe na ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ na-eme ka ike gwụ.
Dapoxetine ga-emetụta ike m ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ rụọ ọrụ?
Syncope, somnolence, ọhụụ na-adịghị ahụ anya, nju anya, na ọgba aghara na ntị bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị nkịtị nke dapoxetine HCL. Ya mere, mgbe ị jiri dapoxetine, a dụrụ gị ọdụ ka ị zere ọnọdụ ọ bụla ebe mmerụ ahụ nwere ike ịkpata, tinyere ịme ihe egwu ma ọ bụ ịkwọ ụgbọala.
Enwere ihe dị iche iche nke ejaculation akaghi aka, sitere na ihe na-akpata ọrịa na-akpata ọrịa. Ọ bụrụ na ị na-alụso ejacation akaghi aka n'ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, ịkwesighi ịta ahụhụ na nkịtị. Site na dapoxetine maka ere online, enwere ike ịgwọ gị ọnọdụ gị ma nwee ike inwe mmekọahụ. Jide n'aka na ị ga-agwa dọkịta gị okwu ka o wee nwee ike ikwenye ma dapoxetine bụ ọgwụ ziri ezi maka gị.